Burcad Badeed - Gpedia, Your Encyclopedia
Calanka lagu yaqaano Burcad Badeedda Soomaalida
Burcad Badeed waa tuugo ama mooryaan oo qoryo ku hubeesan isla markaas neh bada ka soo afduubato maraakiib. Burcad badeednimada waxee jiri jireen boqolaal sano ka hor, waxaana aad looga yaqaanaa wadamo badan oo ka mid ah caalamka. Burcad Badeenimada waxee ka joogsatay wadamada galbeedka boqolaal sano ka hor, waxeena wali ku sii danbeeyaan qaaradaha koonfur ameerika,aasiya iyo galbeedka afrika.
Qarniga aa ku jirno
Qarnigaan aa ku jirno burcad badeednimada waxee ka soo dhashteen bariga Afrika, oona waligeed laga aqoon. koonfurta aasiya iyo bartamaha ameerika burcad badeednimada waligeed wee ka jiri jireen, waxaana maanta burcad badeeda ku arkee biyaha u dhaxeeyo D aduunka.
[[Catego Burcad badeeda waxa ay keenan dhibaatoyij badano oo sameysa bulshada dhan dhaqaale amni iyo iso socod.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Burcad_Badeed&oldid=196393"